खसी बोकाको मा`सूको नयाँ मू`ल्य निर्धारण : अब प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/खसी बोकाको मा`सूको नयाँ मू`ल्य निर्धारण : अब प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ !!
दाङ । दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै जिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ। दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडमा आइतबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिउँदो खसी बोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको हो।
किसान, व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सहका`रीका पदाधि`कारीको बैठकले २० देखि २४ केजी सम्मको खसी`को जिउँदो मू`ल्य प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
बैठकले जिउँदो बोकोको खरिद मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ । ३० केजी सम्म तौल भएको जिउँदो बोकाको खरिद मूल्य प्रति केजी ४ सय ८० र ३० केजी भन्दा माथि तौल भएको बोकालाई प्रति केजी ५ सय रुपैयाँ मू`ल्य नि`र्धारण गरिएको छ।
यो बाहेक सहकारी मार्फत कि`सानका खसी बोका खरिद गर्ने व्यापा`रीले प्रतिकेजीमा थप ७ रुपैयाँ सेवा शु`ल्क तिर्ने गरेका छन्। तुलसीपुरस्थित तालावाङ मासु पसलका सञ्चालक पशुपति जिएले सहकारीको जिउँदो खसी बोका खरिद गर्दा प्रति केजी ५ सय ३७ रुपैयाँ उठाउने ठाउँमै पर्न जाने बताए।